रियाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता, सुशान्तका बुवाले सोधे: १७ करोड कहाँ गयो ? - हिमाल दैनिक
सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्या प्रकरणले दैनिक नयाँ मोड लिएको छ । सुशान्तका पिता कृष्ण किशोर सिंहले मंगलबार पटनामा रिया चक्रवर्ती, बुवा इंद्रजीत चक्रवर्ती, आमा सन्ध्या, भाइ शोविक र दुई म्यानेजर सौमिल चक्रवर्ती र श्रुति मोदीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
सुशान्तका बुवाले रियालाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । उनले सन् २०१९ सम्म छोरालाई कुनै दिमागी समस्या नभएको र रियाको सम्पर्कमा आएपछि अचानक के भयो भनेर प्रश्न सोधेका छन् । उनका अनुसार जो डाक्टरले सुशान्तको उपचारमा संलग्न थिए उनको पनि संलग्ना भएका बताए । उनी पनि रियाको षड्यन्त्रमा समावेश रहेको दाबी गरेका छन् । यस बिषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने सिंहको माग छ ।
उनले रिया र उनको परिवार बिरुद्ध यी सात आरोप लगाएका छन्:
१. सन् २०१९ अघि मेरो छोरा सुशान्त सिंहलाई कुनै पनि मानसिक समस्या नभएको अवस्थामा रियाको सम्पर्कमा आएपछि अचानक त्यस्तो के भयो ? सुशान्तलाई मानसिक रुपमा किन तनावमा पारियो ? यसबारे अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।
२. उनको मानसिक उपचार चलिरहेको थियो भने हामीसँग कुनै लिखित वा मौखिक अनुमति किन लिइएन ? जब कोही मानसिक रुपमा बिरामी हुन्छ तब उनको सबै अधिकारी उनको परिवारसँग हुन्छ । अनुसन्धान गरियोस् ।
४. जब रियालाई मेरो छोराको मानसिक स्थिती नाजुक भइरहेको छ भन्ने थाहा भयो तब यस्तो हालतमा उनको राम्रो तरिकाले उपचार नगर्नु वा उनको उपचारको सबै कागजपत्र आफूसँग लैजानु र मेरो छोरालाई त्यो नाजुक स्थितीमा एक्लै छोड्नु र उनलाई हरेक तरिकाले सम्पर्क तोड्नु । यी कारणले नै मेरो छोराले आत्महत्या गरेको हो ।
५. सुशान्त सिंह फिल्म लाइन छोडेर केरलमा अर्गानिक खेती गर्न चाहन्थे । जब उनका साथी महेश उनीसँग केरल जानका लागि तयार थिए तब रियाले यसको विरोध गरेकी थिएन् । रियाले उनले भनेको नमाने आफूले मिडियामा सबै मेडिकल रिपोर्ट दिने र उनी पागल भइसकेको भनेर घोषणा गरिदिने धम्की पनि दिएकी थिइन् । जब रियालाई सुशान्तले उनको कुनै पनि कुरा नमानेको र उनको ब्यालेन्स पनि कम भइरहेको थाहा भयो तब रियाले सुशान्त उनको लागि अब काम नलाग्ने सोचिन् । त्यसपछि सुशान्तको घरमा बसिरहेकी रिया ल्यापटप, पैसा, गहना, क्रेडिट कार्ड, उपचारका कागजपत्र, पिन नम्बर, पासवर्ड, सबैकुरा लिएर गइन् । यसबारे पनि अनुसन्धान गरियोस् ।
सुशान्तका तीनमध्ये दुई कम्पनीमा रिया डायरेक्टर थिइन् । एक कम्पनीमा रियाका भाइ शोविक चक्रवर्ती एडिशनल डायरेक्टर थिए । तीनै कम्पनीले सुशान्तले आफ्नो कमाईको ठूलो हिस्सा लगानी गरेका थिए ।